ShweMinThar: Huawei P20 and P20 Pro အကြောင်း
Aperture ကျယ်လိုက်၊ Sensor Size ကြီးလိုက်၊ AI တွေသုံးလိုက်နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် 12 MP နဲ့ Company တွေ တိုင်ပတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ Huawei က 40 MP (Main Lens) ကိုစတင်အသုံးပြုပြီး ကင်မရာဘုရင်ဆိုတဲ့ နေရာကို လုသွားပါတယ်...
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ဖုန်းတွေအနေနဲ့ Performance သိပ်မကွာတော့ Camera ကိုပဲ သူ့ထက်ငါ ဦးစားပေးပြိုင်လာကြပါပြီ။ Huawei က P10 ထိ Leica Dual Camera ကိုသုံးလာခဲ့တာ P20 Pro ကြမှ Triple Camera Setup ကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Rear Triple Camera ဖုန်းလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ ကင်မရာ အသားပေးထားတဲ့ ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကင်မရာအပိုင်းကိုပဲ အဓိကထားပြောချင်ပါတယ်။
ရိုးရိုး P20 က အရင် P10 နဲ့အတူတူပဲ။ Dual (RGB + Monochrome) 12 MP နဲ့ 20 MP ကို တပ်ဆင်ထားတာပါ။ P20 Pro ကျတော့ 8 MP Tele Lens အပိုပါလာတယ်၊ အဲ့အပြင် RGB 12 MP အစား 40 MP ကိုပြောင်းသုံးလိုက်တာပါ။ ဆိုတော့ P20 Pro က 8 MP (Tele) + 40 MP (RGB) + 20 MP (Monochrome) ပေါ့။ ဟိုးအရင်က Nokia Pureview 8O8 နဲ့ Lumina 1020 မှာ 41 MP ထိ ဖုန်းတွေမှာ သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ အခု Huawei က သူများတွေ 12 MP နဲ့ တိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ 40 MP ထိ ပြန်သုံးပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လို Handle လုပ်ထားလဲ???
40 MP ဆိုတော့ Pixel အရေအတွက်အရမ်းများသွားတဲ့အတွက် Camera Sensor Size ကိုလည်း အကြီး ပြောင်းသုံးလိုက်ရတယ်။ လောလောဆယ် ဖုန်းတွေထဲမှာ (1/1.7”) Size အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ Huawei က Light Fusion လိုခေါ်တဲ့နည်းပညာကို မိတ်ဆက်သွားတယ်။ Pixel4ခုကို 1 ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ Pixel 1 ခုအဖြစ်ထုတ်ပေးတာပါ။ ဒါက OnePlus ရဲ့ Intelligent Pixel Technology နဲ့တူသလားဆိုတော့ ဆင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ OnePlus က 16 MP ကို4ခုချုံတော့4MP အရည်အသွေးပုံ ဖြစ်သွားတယ် ပြီးတော့ 16 MP Resolution Size အဖြစ်ပြန်ချဲ့တယ်။ Huawei က OnePlus လို4MP အရည်အသွေးမလိုချင်လို့ Megapixels အများကြီးကို တိုးသုံးလိုက်တာပါ။ 40 MP မှာ4ခုကို 1 ခုအဖြစ်ပေါင်းတော့ 10 MP နဲ့ညီတဲ့ အရည်အသွေး ဓာတ်ပုံကိုရတာပါ။ ဒီနည်းပညာက ဟိုးအရင် Nokia Lumina 1020 လည်းသုံးခဲ့တယ် Super Pixel လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့ သိပ်မပေါက်ရောက်ခဲ့ဘူး။ OnePlus ကနေ Lowlight မှာ ပိုကောင်းအောင် ပြန်ပြောင်းသုံးခဲ့တယ်။ အခု Huawei ကလည်း သုံးလာပြီဆိုတော့ ဒီနည်းပညာက ဖုန်းတွေ အနေနဲ့ 12 MP ထက်ကျော်လွန်ပြီး သုံးနိုင်အောင် Lowlight မှာပိုကောင်းအောင် အထောက်ကူပြုနေတာတော့ အသေချာပါပဲ။ Xiaomi က Redmi Note5မှာ Pixel Blending ဆိုပြီး အဲ့နည်းပညာကို သုံးခဲ့ပါတယ်။
P20 Pro မှာ Tele Lens က (f/2.4), Main Lens က (f/1.8, Monochrome Lens က (f/1.6), Front Camera က (f/2.0)
P20 မှာက Main Lens က (f/1.8, Monochrome Lens က (f/1.6), Front Camera က (f/2.0)
Pixel Size and Sensor Size
Huawei P20 Pro မှာ Pixel4ခုပေါင်းထားတာက 2µm Size နဲ့သွားညီပါတယ်၊ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် 2µm ဆိုတာ အတော်ကြီးမားပါတယ် ဒါ့ကြောင့် Pixel တွေအများကြီး ဆန့်အောင် Camera Sensor Size ကို ဖုန်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံး 1/1.7” ထိပြောင်းသုံးလိုက်ရတာပါ။ P20 ရဲ့ Camera က 12 MP ကိုမှ 1.55µm နဲ့သုံးပေးထားတာပါ။ Sensor Size ကိုလည်း 1/2.3” ထိနည်းနည်းကြီးတာ ပြောင်းသုံးပေးထားပါတယ်။ Pixel Size and Sensor Size လည်းကြီးတဲ့အတွက် Google Pixel2နဲ့ S9+ ကို ကျော်တတ်သွားတာပါ။
OIS or AIS ???
P20 Pro က The Verge ရဲ့ပြောပုံအရ သေချာတာတော့ Video ရိုက်တဲ့အခါ ငြိမ်ဖို့အတွက် Tele Lens ကဲ့သို့ Main Lens မှာ OIS မပါပါဘူး။ ဒါမဲ့ Huawei က OIS အစား AI ကိုအသုံးပြုပီး Image Stabilization ကိုထိန်းသွားတာပါ။ Huawei ကတော့ Artificial Intelligence Stabilization AIS လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလို Camera Setup လုပ်ပုံလောက်နဲ့ OIS ထည့်ဖို့မလွယ်လောက်လို့ AIS ကို ထွင်လိုက်တာထင်တယ်။ AIS က Object Recognization နဲ့ Outlines of Shapes တွေပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ Video ရိုက်ကူးနေရင် ငြိမ်သက်စွာနဲ့ Zoom5ဆချဲ့လို့ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့5sec စာ Long Exposure ရိုက်တဲ့အခါ Tripod မသုံးပဲ AIS အကူညီနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသေးတယ်။
4D Predictive Focus လို့အမည်ပေးထားတဲ့ AF System က ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာတွေကို သေချာစွာ Focus ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာက P20 Pro မှာ Tele and Main Lens ကြားက Laser Transmitter and Receiver Sensor တွေ၊ LED Flash မှာပါတဲ့ Color Temperature Sensor တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တာပါ။
Selfie အနေနဲ့ 24 MP (f/2.0) ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ Light Fusion နည်းပညာကို သုံးနိုင်တယ်။ Selfie Portrait အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။
P20 and P20 Pro ကော Portrait Mode အသုံးပြုနိုင်တယ်။ P20 Pro မှာ Portrait က Camera ၃ လုံး စလုံး အလုပ်လုပ်တာပါ။ Light Fusion ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Lowlight မှာ အခြားဖုန်းတွေထက် သိသိသာသာ ကောင်းလာပါတယ်။ Pro Version မှာ Tele Lens ပါတဲ့အတွက် 3x Optical Zoom ကိုရတယ်၊ 5x Hybrid Zoom လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ P20 မှာက 2x Lossless Zoom ပဲရတယ်။ Pro Version မှာ ISO Sensitivity ကို 102400 ထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက DSLR Canon 5D Mark IV မှာ အသုံးပြုနိုင်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ 960fps Slow mode ရမယ်။ အခြားအနေနဲ့ 360• Face Unlock ပါမယ်။ Pro က ရေဆိုခံမယ်။
Display က Pro က 6.1 ကို AMOLED နဲ့ P20 က 5.8 ကို LCD နဲ့ပါ။ Notch ကိုတော့ AMOLED နဲ့ပဲ ဖျောက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Chipset တွေက Pro ကော P20 ကောအတူတူပဲ ကိုယ်ပိုင် Processor Kirin 970 ကိုသုံးထားတယ်။ GPU ကတော့ Mali-G72 MP12 ကိုသုံးထားပါတယ်။ RAM က P204GB၊ Pro6GB။ Storage ကတော့ 128 GB ပါ။ Pro မှာ 3.5mm Jack မပါပါဘူး။ Battery ကတော့ Pro က 4000 mAh၊ P20 က 3400 mAh ကိုသုံးထားပါတယ်။ Fast Charge လည်းပါတယ်။ Porsche Version ပဲ Wireless Charging ရပါတယ်။ ပီးတော့ Fingerprint ကိုကျောဘက်မှာကော In Display မှာပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် Huawei အနေနဲ့ Performance အပိုင်းကို အဓိကထား မိတ်မဆက်သွားပေမဲ့ ကင်မရာပိုင်းကတော့ အတော်ကျွတ်စ်နေပါပြီ။ ဘာလို့ S9+ ထက်သာသွားတာလည်းဆိုရင်??? P20 က အရင် Mate 10, P10 တို့တည်ဆောက်ထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Sensor Size and Pixel Size အကြီးတွေပြောင်းသုံးပြီး Aperture ကျယ်သွားပါတယ်၊ Aperture, Sensor and Pixel Size တို့ကိုမျှတအောင်လုပ်နိုင်ပြီး AI အကူညီနဲ့မို့ သာသွားတာပါ။ ပြောချင်တာက Lowlight မှာ ကောင်းဖို့အတွက် Aperture စွတ်ကျယ်ပြဖို့မလိုဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါ။ Megapixel များတိုင်းမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ Megapixel အများကြီးအဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ Pixel ချုံတဲ့နည်းပညာကလည်း နောက်ပိုင်းလိုလာပါပြီ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ စာရေးသူမကြိုက်ပေမဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ Color တွေကြောင့် မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ P20, P20 Pro ထက် ပိုလှတဲ့ Symmetrical Design နဲ့ Curve 2K Display နဲ့ လာတဲ့ Porsche Mate RS ကိုတော့ အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ P20 ကအနည်းဆုံး ၁၀ သိန်းဝန်းကျင် Pro က 14 သိန်းဝန်းကျင်ဖြစ်မှာပါ။ အသေးစိပ်ကိုတော့ လက်ထဲ ရောက်လာရင် Review လုပ်ပေးပါ့မယ်။ Review လေးလဲ လုပ်ချင်ပါတယ်။ Porsche Version က မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဝယ်ဖို့မလွယ်ကူလောက်ဘူး...
#PLANETX #PX #Huawei #P20 #P20Pro #PorscheMateRS